Public messages for DaDa1221
ATTENTION PEOPLE! WE HAVE A COOKIE SCAMMER ON OUR HANDS! THIS GUY IS THE WORST KIND OF FEDERAL CRIMINAL IN EXISTENCE! REMAIN VIGILANT AS HIS FORCEFUL MILITARY EXECUTION SQUAD IS EN ROUTE TO HIS RESIDENCE.
Mar 22, 2012 9:54am
Sir, i believe you owe me one cookie :3
Mar 8, 2011 7:13pm
SERIOUSLY DUDE I WANT MY EFFING COOKIE YOU DUMB BEECH
Nov 8, 2011 8:18pm
Sorry.. i was dead :P
Jul 1, 2011 2:47pm
I WANT MY COOKIE NOW DAMMIT
Jul 4, 2011 6:57am
GIVE ME MY DAMN COOKIE I WAAAAAAAAAAAAAANT MY COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKIE
NOW OR ILL COME TO U AND KILL U WITH A OREO
Jul 11, 2011 4:27am
Can I have my cookie now please thanks mate
GIVE ME MY GOD DAMN COOKIE OR I WILL KILL YOUR DOG
Mar 8, 2011 7:12pm
i rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. no…show morei rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUshow less
i rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. no…show morei rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi rate you up.. now where is my god damn cookie?????? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUshow less
Jan 23, 2011 4:23pm
I want my coockie..)=
Jan 21, 2011 5:50pm
as of 2:47 22/1/2011 you owe approximately 3162 cookies to various parties, myself included. this is an official request to send out those cookies in the next month or your account will be repossessed and sold to pay for cookies.- sincerely DOC (department of cookies)
WHERE IS MY DAMN COOKIE GIVE IT TO ME
Nov 8, 2010 2:29pm
WERE IS MY DAM COOKIE I HAVE BEEN WAITING FOR FIVE YEARS oh i frogot to rate it there now WERES MY DAM COOKIE
Nov 2, 2010 5:44am
fail man ur a fail since last year here still level 9??!?!?! fail…
Oct 22, 2010 2:11pm
Nov 1, 2010 8:52am
May 9, 2010 11:14am
Nov 1, 2010 8:53am
give me mah cookie or i kill your mouse!
Aug 27, 2010 6:46am
4 words! i ate the cookies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aug 26, 2010 7:14am
I WANT MY COOKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jul 13, 2010 11:50pm
Hey you lied to me dude I want MY GODAMN F*****G COOKIE RIGHT NOW NOW OR ILL FIND YOU
Jun 18, 2010 1:11am
Im not joken dude i want that dam cookie
Jun 4, 2010 9:12pm
WHERE’S MY COOKIE! http://www.kongregate.com/games/ArmorGames/sonny?acomplete=sonny